Iavoloha : tsy voaresaka indray ny kolontsaina | NewsMada
Ambanin-javatra sa ambin-javatra?…. Tsy nasian-teny indray ny kolontsaina nandritra ny fifampiarahabana nahatratra ny taona 2016 notanterahina teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha, omaly. Voaporofo fa tsy laharam-pahamehana ho an’ny mpitondra isan’ambaratongany ny kolontsaina sy ny zavakanto. Mbola raiki-tampisaka ny fametrahana azy ireo (kolontsaina sy zavakanto) ho ambin-javatra.
Efa voaporofon’ny mpahay tantara sy ny mpandinika ny fiarahamonina anefa fa anisan’ny fomba mahomby hitazonana ny fahantrana any amin’ny tany voazanaka ny famotehana ny kolontsainy. Afangaro ny fahalalana sy ny finoana. Potehina amin’ny fomba rehetra ny tenin-drazana. Haratsiana ny fomba amam-panao, sns ! Tany, teny, fomba, kolontsaina, raha ireo no potika, rava ho azy ny maha firenena ny firenena iray.
Fitaizana nahomby ny hiragasy, aiza izay kianja ho an’ny mpihiragasy ? Tsy azo ambakaina izay tia milalao fanorona fa tonga olona maranin-tsaina sy fatra-pitetika. Nahoana no tsy manana toerana ilalaovana izany isika ? Sa manahirana raha maranin-tsaina ny « vahoaka » ?